उच्च प्रविधी लेखापाल सहयोग गर्न
एक सानो थप र लेखापाल जीवन सजिलो utterly हुनेछ। प्रगति ज्यादा देखि ज्यादा कागज लेखा प्रयासमा facilitated। निस्सन्देह, अझै तयार छैन तिनीहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न र व्यवहारमा उतार्ने, तर यो विश्वास मात्र अस्थायी कमी छ।
त्यसैले, एक इलेक्ट्रोनिक सम्झौता के हो? को छाप र संख्या एक सेट हस्ताक्षर प्रतिस्थापन जो यो कागजात, ग्राहक द्वारा आविष्कार। निस्सन्देह, डाटा एक गोप्य कुञ्जी सुरक्षित छ। र यो अधिक विश्वसनीय जो धेरै कारीगरों गाँस्न सजिलो छ कुनै पनि हस्ताक्षर र छाप छ।
वास्तवमा, सम्झौता मस्यौदा निम्नानुसार छ: यो एक हस्ताक्षर हेर्नेछ कसरी दुई कम्पनीहरु सहमत एक इलेक्ट्रोनिक कागजात, र त्यसपछि - सामान्य औपचारिकताएँ। कागजातको दर्ता को क्षण देखि, मान्य वैध र कानुनी हुन। यस प्रकारको को कागजात को विनिमय लागि कर्पोरेट सर्भर सधैं विश्वसनीयता को एक उच्च डिग्री को छैन घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ किनभने सुरक्षित सर्भर मा एक विशेष मेलबक्स छ आवश्यक छ।
बस हिजो यो कर लेखा को तैयार, रिपोर्ट वितरण, व्यक्तिमा बनाइने व्यक्ति लेखापाल निरीक्षण शरीर मा पर्छ भनेर सोचे थियो। कर काम गर्न ई-मेल गरेर कागजात पठाउन शानदार देखिन्थ्यो। अब तथापि, इलेक्ट्रोनिक अनुबंध - यो एक वास्तविकता छ।
तर हामी औपचारिकताएँ एक नम्बर बारेमा भूल गर्न सक्दैन। त्यसैले, लेनदेनको निष्कर्ष र सर्भर मा जस्तै सम्बद्ध सन्देशहरू भण्डारण गर्न निश्चित हुन। आखिर, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा मात्र भण्डारण साझेदार पत्राचार समस्या छ भने, महत्वपूर्ण वजन छैन हुनेछ। यो कागजात एक निश्चित मितिमा एक निश्चित कम्पनी बाट ई-मेल द्वारा पठाइएको थियो भनेर देखाउन आवश्यक छ। यस मामला मा, कागजातहरू सन्देश शरीर र संलग्न फाइलहरू मा झूठ हुन सक्छ। मुख्य कुरा यी हुनुपर्छ भनेर।
"ICQ" मा पत्राचार पनि मान्य हुनेछ। तर यहाँ कारोबार छलफल गर्न छ, ICQ कुनै पनि कानुनी र लेखा सेवा छैन यो लायक छ। कारण "ICQ" को कथा विशिष्ट कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका छ, त्यसैले यो जानकारी चुनौती हुन सक्छ। यो ई-मेल गरेर पदहरू पठाउन राम्रो छ। र अझ राम्रो, प्राप्त यदि प्रापकमिलानकर्ता रिपोर्ट।
तपाईं आज संक्षेप चाहनुहुन्छ त्यसैले लेखाकार को एक ठूलो अनुपात इलेक्ट्रनिक ढाँचा प्रयोग अपनाए। तर हालसम्म मात्र केही नवीनता अँगाले। 2007 मा, वर्ष प्रयोगकर्ताहरूको संख्या 0.2 प्रतिशत भन्दा बढी छैन। 2010 मा यो आंकडा केवल 0.5 प्रतिशत उठ्नुभयो। तुलना गर्नुहोस्: संयुक्त राज्य अमेरिका मा Accountants प्रतिशत 25 इलेक्ट्रनिक ढाँचा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
तैपनि, पनि staunch अर्थोडक्स इलेक्ट्रोनिक अनुबंध भविष्य छ भनेर अस्वीकार छैन। समस्या अन्यत्र निहित - विद्युतीय हस्ताक्षर को प्रणाली अझै पनि सही छ क्षणमा, त्यहाँ यी सम्बन्ध अभिशासित कुनै स्पष्ट व्यवस्था हो। यस कारण, बेकारी कागज देखि आफ्नो कर्मचारीहरु उद्धार गर्न कुनै हतारमा नेताहरूको संख्या। तर प्रगति समय अंकन छैन!
औषधि उत्पादन: सुविधाहरू, रुझान, लगानी
परिवहन कसरी प्रतिस्पर्धा सामना गर्ने?
घरमा मोमबत्ती कसरी बनाउने?
सानो सहरमा लागि व्यापार विचार
घ्यु रस, चिकित्सा प्रयोग
देश मा कट्टर - सजावटी र परिदृश्य निर्माण
उद्यमशीलता: परिभाषा, दर्ता नियम र गरिरहेको को peculiarities
माटो को के गर्न सकिन्छ "Maynkraft" र यो कहाँ फेला पार्न
वास्तविक नाम Utesova। जीवनी लियोनिद Utesov
पेंशन को indexation के हो?